Izindaba - Amathiphu kaKhisimusi 2020
I-Molecular Biology iyasetshenziswa
Imikhiqizo ye-Centrifuge tube
I-General Lab Plasticware
Amagilavu ​​asetshenziswayo wezokwelapha akwaCovid-19
Uchungechunge lwe-Covid-19 Medical Consumable non-woven
Amathiphu kaKhisimusi 2020
Kubantu abaningi, uKhisimusi uzohluka kakhulu kulo nyaka. Kulesi sihloko, sinikeza ngamathiphu ayisisekelo ayi-5 okusiza ukuqinisa impilo yethu ngesikhathi nangemva kwesikhathi samaholide sika-2020.
Usuku ngalunye, ososayensi bafunda kabanzi ngokuthi iSARS-CoV-2 isebenza kanjani, futhi kuyakhishwa nemithi yokugoma. Yebo, u-2020 ube yinselelo, kepha, ngocwaningo lwezokwelapha endaweni yethu yezikhali, sizohlula i-COVID-19.
Noma kunjalo, ngaphambi kokuthi sinqobe i-COVID-19, kusamele siqhubeke nokuyihlonipha. Sinezeluleko ezimbalwa ezingezansi zokuthi uhlale uphilile:
Ayikho indatshana yokugcina impilo yengqondo izophelela ngaphandle kokusho ukulala. Asisiniki isikhala esisidingayo ezweni lethu lesimanje, elikhanyiswe nge-neon. Sonke sidinga ukwenza kangcono.
Ukulahlekelwa ubuthongo kuphazamisa imizwa yethu. Lokhu kuyinkimbinkimbi, kepha futhi kusekelwa ngocwaningo. Isibonelo, ucwaningo oluthile luphetha ngokuthi, "Ukulahlekelwa ubuthongo kukhulisa imiphumela engemihle yemizwelo yezenzakalo eziphazamisayo ngenkathi kunciphisa imiphumela emihle yemicimbi yokuqinisa izinhloso."
Ngamanye amagama, uma singalali ngokwanele, maningi amathuba okuthi sizizwe singekho esimweni lapho izinto zingahambi kahle, futhi mancane amathuba okuthi sizizwe kahle uma zihamba kahle.
Ngokufanayo, olunye ucwaningo luthole ukuthi “abantu baba namawala futhi babe nomthelela omncane omuhle esikhathini esithile sokulala isikhashana.” Nakulokhu futhi, isikhathi sokulala esincishisiwe sibonakala sinciphisa imizwa.
Ngesikhathi lapho imizwa yesizwe isisezingeni eliphansi, ukulala kancane kungaba yindlela elula yokuthola izikali esivuna zona.
Kodwa-ke kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ubudlelwane obuphakathi kokulala nempilo yengqondo buyinkimbinkimbi futhi izindlela ezimbili - izingqinamba zempilo yengqondo zingathinta ikhwalithi yokulala, futhi ukungabikho kokulala kungalimaza impilo yengqondo.
2. Gcina usebenza
Njengokulala, noma iyiphi indatshana ehlose ukukhulisa impilo yengqondo kufanele ifake ukuzivocavoca umzimba. Njengoba izinga lokushisa lehla, ukuziphoqelela ngaphandle kungaba yinkinga enkulu. Ososayensi bakhombisile ukuthi ukuvivinya umzimba kungakhulisa imizwa esikhathini esifushane nesikhathi eside.
Ukubuyekezwa okushicilelwe ku-2019, ngokwesibonelo, kuthole ubudlelwano phakathi kokuqina komzimba kanye nobungozi bokuphazamiseka kwengqondo okuvamile. Ngokufanayo, ukuhlaziywa kwe-meta ngo-2018 kuphethe ngokuthi "ubufakazi obutholakalayo busekela umbono wokuthi ukuvivinya umzimba kungavikela ekuqhamukeni kokudangala."
Okubalulekile, akudingeki ukuthi sigijime ibanga lemizuzu engu-4 ukuthola izinzuzo zengqondo ngokuvivinya umzimba. Ucwaningo lwango-2000 luthole ukuthi ukuhamba okufishane, okwemizuzu eyi-10-15 kukhuphule imizwa futhi kukhulise ukuzola.
Ngakho-ke noma ngabe kuyinto elula, njengokudansa ekhishini lakho noma ukuhamba nenja yakho isikhashana, konke kubalulekile.
Kuyiqiniso ukuthi akukho ukuzivocavoca noma ukulala okungathatha indawo yokwangana okuvela kumngane noma esihlotsheni, kepha uma imizwa yethu ikhuphuka okwesikhashana noma imizwa yethu ejwayelekile iphakanyisiwe, kungasisiza ukuthi silawule ukudumazeka kangcono futhi siqambe kabusha lo nyaka onzima.
Hlala unolwazi nge-COVID-19
Thola izibuyekezo zakamuva nolwazi olusekelwa ocwaningweni ku-coronavirus yenoveli ngqo ebhokisini lakho lokungenayo.
3. Ukubhekana nesizungu
Kubantu abaningi, isizungu sesivele siyisici esibalulekile sango-2020. Ukucabanga ngabangane nomndeni ngesikhathi sikaKhisimusi kungenzeka kuqinise leyo mizwa yokuhlukaniswa nabanye.
Ukuze ulwe nalokhu, yenza umzamo wokuxhumana. Kungaba ucingo olulula noma ingxoxo yevidiyo, hlela izingxoxo ezithile kuzo. Khumbula, akuwena wedwa ozizwa unesizungu. Uma kuphephile futhi kuvumelekile endaweni yangakini, hlangana nomngani ndawana thile ngaphandle bese uzulazula.
Ngena nabanye - ama-imeyili, imibhalo, kanye nemithombo yezokuxhumana ingaba wusizo ezikhathini ezinjengalezi. Esikhundleni sokukhukhula inhlekelele, thumela u- "Unjani?" kothile omkhumbulayo. Cishe nabo bayakukhumbula.
Hlala umatasa. Isikhathi esingenalutho singahamba kancane. Thola i-podcast entsha, lalela izingoma ezintsha noma ezindala, thatha leso siginci, qala ukudweba futhi, ufunde ikhono elisha, noma yini enye. Ingqondo ematasa futhi ethembekile ayinamathuba amaningi okuhlala esizungu.
Ucwaningo lwakamuva luthole ukuthi abantu ababamba iqhaza emsebenzini othokozisayo futhi abangena esimweni sokugeleza baphumelela kangcono ngesikhathi sokuvalelwa ngokweqile kanye nokuhlukaniswa. Ababhali babhala:
"Ababambiqhaza ababike ukugeleza okukhulu baphinde babika imizwa eyakhayo, izimpawu zokucindezeleka ezingekho ngaphansi, isizungu esincane, isimilo esinempilo, kanye nokuziphatha okungenampilo okumbalwa."
4. Yidla uphuze kahle
UKhisimusi uhlanganiswa nengxenye encane nokuzitika ngokweqile. Angicabangi ukuthi kungaba okulungile noma okunengqondo ukulindela ukuthi abantu, ngo-2020 wayo yonke iminyaka, banciphise ukudla abakudlayo.
Ngalokho kusho, kukhona ubufakazi obukhulayo bokuthi esikudlayo kuthinta imizwa yethu. Isibonelo, ukubuyekezwa kwakamuva okuvela ku-BMJ kuphetha ngokuthi:
“Indlela yokudla enempilo, njengokudla kwaseMedithera, ihlotshaniswa nempilo engcono yengqondo kunezindlela zokudla 'ezingenampilo,' njengokudla kwaseNtshonalanga.”
Ngalokhu engqondweni, ukuqinisekisa ukuthi sidla kahle ngaphambi nangezinsuku ezilandelayo zikaKhisimusi kungasisiza ukuthi sigcine ingqondo ezinzile.
Lindela ngokujulile, izihloko ezisekelwa yisayensi zezindaba zethu ezinhle kakhulu nsuku zonke. Thepha bese ugcine ilukuluku lakho linelisekile.
5. Qondanisa okulindelwe
Akuwona wonke umuntu osekhasini elilodwa uma kukhulunywa ngobhubhane. Abanye abantu kungenzeka ukuthi basavikela, kanti abanye kungenzeka ukuthi banqotshwe "ukukhathala okuwubhadane" futhi babuyela kokujwayelekile ngaphambi kwesikhathi. Abanye basengasebenzisa amagama anjengokuthi "umkhonyovu" futhi benqabe ukugqoka imaski.
Amanye amalungu omndeni angahle afune ukudla komndeni, njengezinsuku ezikude ezinde zango-2019. Abanye, ngokuqondakalayo, kungenzeka ukuthi babona ngeso lengqondo uhlelo lokudla olususelwa ku-Zoom.
Lokhu kwehluka kwesikhundla kunamandla okubangela ukudana nokucindezeleka okwengeziwe. Kubalulekile ukuba nezingxoxo ezicacile nezingagunci namalungu omndeni ngalokho abangakulindela kulo nyaka.
Khumbula, nganoma iyiphi inhlanhla, uKhisimusi olandelayo uzobuyela esimeni esithile sendabuko. Sethemba ukuthi kuzofanele sibekezelele lo Khisimusi ongavamile futhi ongakhululekile kanye. Uma ungakhululekile ngohlelo lomuntu ohlongozwayo, yithi “cha.” Futhi unamathele ezibhamu zakho.
Ngama-spikes uma kwenzeka izinombolo ezingxenyeni eziningi ze-US, inketho enengqondo kakhulu ukunciphisa ukuxhumana kwabantu ngangokunokwenzeka.
Yize imithetho, imithetho kanye nemithethonqubo yehlukahluka phakathi kwezifunda, uma kukhulunywa ngakho, umuntu ngamunye kufanele azenzele isinqumo sakhe sokuthi usebenza kanjani ngaphakathi komthetho. Ukuvikela impilo yakho yengqondo, yenza isinqumo sakho futhi ungavumeli ukuthi ufakwe ujantshi ekwenzeni into ocabanga ukuthi iyingozi kakhulu.
Indlela ephephe kunazo zonke yokujabulela uKhisimusi kulo nyaka, ngeshwa, ukukwenza cishe.
Ngokwami, izeluleko ezichazwe ngenhla azikwazi ukuthatha indawo yezikhathi ezimnandi esizilindele ngoKhisimusi. Kodwa-ke, uma senza umzamo omkhulu wokudla okulungile, silale kahle, futhi sihambahamba, umphumela wokuqongelela unganela ukujabulela inzuzo ethile.
Khumbula, sisendlini ngqo. Finyelela futhi ukhulume nabangane nomndeni uma uzizwa uphansi. Izinkinga bazizwa bephansi, futhi. Ungalokothi wesabe ukukhuluma ngemizwa yakho. Akekho onenkathi yeholide abebeyilindele.
Oda i-FDA egunyaziwe ekhaya Covid-19 test
Thatha ukuhlolwa kwe-inthanethi ukuthola ukuthi ufanelekile yini ukuhlolwa kwe-Covid-19 ekhaya.
Ekugcineni, Ngikufisela okuhle kakhulu!
Sifisela wena uKhisimusi onokuthula, ojabulisayo nonempilo!
Isikhathi Iposi: Dec-22-2020